श्रीमद्भागवत गीतको सार - जीवन सुखी र खुसी बनाउने उपायहरु (Summary of Srimad Bhagwat Geeta - Ways of making life happy and delighted)
Minister and Secretary of Ministry of Education were present in First launching of NASA result
Presenting National Assessment Results in Regional Seminar....
Ms Ambika Sharma is interpretating sign language in educational program
Meeting with Finnish Delegates, talk was about quality education and assessment
A training seminar participation, facilitator - Dr. Jari Metsamuurenon, Finland
A amazing dance by Deaf students
A seminar attended at Thailand.
Friends are looking presentation of Dr. Bhojraj Kafle.
Dr. Jari, Finnish consltant
School Performance Audit in Loksewa HSS, Nawalparasi...
Learning never ends. New technologies and knowledges should be learnt and shared. Impressed from connectivism, we are here to share ideas together, learn together. The aim of this website is to share ideas in teaching and learning, articles and reports of educational assessments, personal and institutional who are interested to host...Read More...
We can serve community schools to improve quality of education....
श्रीमद्भागवत गीतको सार - जीवन सुखी र खुसी बनाउने उपायहरु (Summary of Srimad Bhagwat Geeta - Ways of making life happy and delighted)
Published: 24 October 2016 | Hits: 3274
अनुवाद तथा संकलनः श्याम प्रसाद आचार्य
हिन्दुबाद हिन्दु धर्म मात्र नभई यो जीवन पद्धति हो भन्ने भनाइ आजभोली धेरै छलफलमा आएको छ । त्यसैले हिन्दुबाद सबै धर्मावलम्बीहरुको साझा दर्शन हो । श्रीमद्भागवत गीता हिन्दूहरूको धर्मग्रन्थका आलावा हिन्दुबादको महाकाव्य हो भनी स्वीकार्न सकिन्छ । यसमा भगवान कृष्णले अर्जुनसँग र अन्य व्यक्तिहरू सँगको सम्बादका रूपमा कवितात्मक प्रस्तुती गरिएको छ । यसमा जीवन दर्शन दिइएको छ । सत्य, जन्तु, जगत, जन्म,
आत्मा आदिको बारेमा विभिन्न सन्दर्भसँग जोड्दै तत्कालीन समयमा दिइएको दर्शन आजपनि उत्तिकै सन्दर्भिका छ ।
श्रीमद्भागवत गीता हामीले पढ्न पाएका हुँदैनौँ । पढ्ने फुर्सद पनि कहाँ मिल्छ र ? यो ब्यस्त जीवनका बीचमा भागवत गीताको सार यस लेखमा दिइएको छ । यो पढी मनन गर्नुहुनेछ ।
किन व्यर्थमा चिन्ता गर्नुहुन्छ? को सँग विना अर्थ डराउनुहुन्छ? तपाइलाई कसले मार्न सक्छ ? आत्मा न जन्मिन्छ न त मर्छ ।
जे भयो त्यो ठीक भयो, जे भै रहेको छ त्यै ठीक भै रहेको छ र जे हुने छ त्यो पनि ठीक हुनेछ । तपाइ विगतको पश्चाताप नगर्नुहोस् । भविष्यको चिन्ता पनि नगर्नुहोस् । वर्तमान चलिरहेको छ ।
तपाइको के गयो र तपाइ रोइ रहनु भएको छ? जन्मिँदा तपाइले के लिएर आउनु भएको थियो जुन तपाइ अहिले गुमाउनु भयो? तपाइले के उत्पत्ति गर्नु भएको थियो जुन नास भयो? न त तपाई केही लिएर आउनु भएको थियो, जे लिनु भयो त्यो यहीँबाट लिनु भयो । जो दिनु भयो यहीँ नै दिनु भयो । जो लिनु भयो यीनै भगवानबाट लिनु भयो । जे दिनु भयो यीनै भगवानका लागि दिनु भयो ।
खालि हात आउनु भयो र खालि हात नै जानु हुनेछ । जुन चीज आज तपाइको छ त्यो हिजो कसैको थियो र भोलि कसेको हुने छ । तपाई यसलाई आफ्नो सम्झेर मग्न हुनु भएको छ । बस् यही खुसी तपाइको दुःखको कारण हो ।
परिवर्तन संसारको नियम हो । जुनलाई तपाइ मृत्यु सम्झनु भएको छ तेही त जीवन हो । एकछिनमा तपाइ करोडौँको मालिक बन्नु हुन्छ र दोस्रो क्षणमा तपाई गरिब बन्नु हुनेछ । मेरो-तेरो, सानो-ठूलो, आफ्नो-अर्काको, मनबाट मेटाई दिनुहोस्, फेरी सब तपाइको नै हुनेछ, तपाई सबैको हुनु हुनेछ ।
न यो शरीर तपाइको हो, न तपाई शरीरको हो । यो अग्नि, जल, वायु, आकाश बाट बनेको हो र यसैमा मिल्न जानेछ । तर आत्म स्थिर छ - फेरी तपाई के हो ?
तपाई आफू आफैलाई भगवानमा समर्पित गर्नुहोस् । यो नै सबैभन्दा उत्तम सहारा हो । जो यसको सहाराको जान्दछ ऊ डर, चिन्ता, शोक बाट सधैँ मुक्त हुनेछ ।
जो तपाई राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भगवानमा अर्पण गर्नुहोस् । यस्तो गर्दाखेरि जीवन मुक्त को आनन्द अनुभव हुने छ ।
Copyright © 2019 ShyamAcharya Official Site Rights Reserved.
Powered By: "AabhaTechnology"